သတင်းများ - Pan ka lay
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ကျင်းပခဲ့သော TEDx Yangon ပွဲတွင် ပန်းကလေးတည်ထောင်သူ Henriette Ceyracမှ ဓမ္မတာနှင့်ပတ်သက်သော အယူသီးမှုကို ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး နားထောင်သူပရိတ်သတ်များအား ဒါတွေကို စိန်ခေါ်တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
Myanmar Times နှင့်အတူ အယူမှားများကို တွန်းလှန်ခြင်း
မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာလောက၏ ရှေ့ဆောင်ထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည့် မြန်မာစံတော်ချိန်သတင်းစာတွင် ပန်းကလေး၏ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်သော So What!? ကန်ပိန်းအကြောင်း ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြခဲ့ခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏ မျှော်မှန်းချက်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။
We media interview
TEDx ပွဲအပြီးတွင် နာမည်ကြီး အွန်လိုင်းမီဒီယာဖြစ်သည့် We Mediaမှ ပန်းကလေးအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပန်းကလေးတည်ထောင်သူအား အင်တာဗျူးခဲ့ပါသည်။
Myanmar Times ကလည်း So What!? ပါတဲ့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော So What!? ကမ်ပိန်းမိတ်ဆက်ပွဲတွင် မြန်မာတိုင်းမ်စ် သတင်းစာမှ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကမ်ပိန်းနှင့် ကမ်ပိန်းတည်ထောင်သူ Henriette Ceyrac ကို ထောက်ခံမှုပြသခဲ့ပါတယ်။ ကမ်ပိန်းမား အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုများဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မသန္တာလှိုင်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။